Master Pokémon hadda waxaa laga heli karaa App Store | Wararka IPhone
Bishii Juun ee la soo dhaafay, Pokémon Master ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay, ciyaar cusub oo ka dhalatay iskaashiga shirkadda Pokémon iyo DeNA, soosaaraha horyaallada kale ee Nintendo sida Super Mario Run iyo Fire Emblem Heroes. Laba bilood ka dib markii lagu dhawaaqay, ciyaarta mar hore waxaa laga heli karaa App Store gebi ahaanba bilaash ah soo dejinta.
Dhacdooyinka Pockémon Master waxay ka dhacaan Passio, jasiirad macmal ah halkaas oo Tababarayaasha ay xiriir gaar ah la leeyihiin Pokémon. Ciyaartani waxay noo bilaabaysaa xiiso xiiso leh Pokémon. Intii aan ku guda jirnay socdaalkeenna jasiiradda, waxaan la kulannay tababarayaal aan la leenahay cidda ay yihiin waxaan la yeelan karnaa saaxiibo sidaas ayaanna ugu dari karnaa kooxdeena.
Markaan la samaysanno koox macallimiin kale, waxaan ka qayb geli karnaa dagaallada Pokémon, dagaallada lagu tilmaamo inay ku jiraan kooxo 3 ka soo horjeeda 3 waqtiga dhabta ah. Laakiin Pokémon kaligood maahan kuwa kaqeyb galaya dagaalka, Maaddaama Tababarayaashu ay awoodi doonaan inay adeegsadaan dhaqdhaqaaqyo ama walxo kordhiya astaamaha Pokémon ama ku bogsiiya inta lagu jiro dagaalka.
Master Pokémon ayaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah. Codsiga gudahiisa waxaan ku haynaa iibsiyo kala duwan oo gudaha ah oo noo oggolaanaya inaan soo iibsanno dahabka
Shuruudaha Master Pokémon
Qeybtaan waxaa laga yaabaa inaan ka helno qeybta xun ee ciyaartan, maadaama ay kaliya la shaqeyneyso boosteejooyinka kuwa ah ay maamusho 2 ama ka badan GB oo RAM ah, markaa aaladda ugu da'da weyn ee ay ku habboon tahay waa iPhone 6s iyo iPad Air 2.
Mid kale oo ka mid ah shuruudaha kulankaan, waxaan ka helnaa nooca iOS-ka ee qalabkeennu maareynayo. Xaaladdan oo kale waa inay noqotaa macruufka 11 ama ka sareeya. Laakiin, in kasta oo ay kuwani yihiin shuruudaha ugu yar, sida uu sheegayo soosaaraha laftiisa, waxay u egtahay in aaladaha iswaafajiya qaarkood ay u shaqeeyaan si sax ah.
Pokémon Masters EXfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Master Pokémon hadda waxaa laga heli karaa App Store
Apple waxay furaan ilaa dayactir dhinac saddexaad ah